နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့်ငါး – The Feeling (Love It When You Call) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့်ငါး – The Feeling (Love It When You Call)	4
နားဦးတည့်ရာ သုံးဆယ့်ငါး – The Feeling (Love It When You Call)
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 20, 2015 in Music |4comments
ငယ်ငယ် တုန်း အိမ်ချင်းကပ်ရက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိတယ်။
. ကျောင်းမတူတော့ နေ့က အကြောင်းတွေ ကို ညည တွတ်ထိုးကြတယ်။
နဲနဲ ကြီးလာတော့ ပိုပြီး အပေါင်းအသင်း များ လာရော။
အိမ်နီးချင်း မဟုတ်ကြလေတော့ ညည ဆို တယ်လီဖုန်း ကို နာရီ နဲ့ ချီပြီး နားပူ အောင် ပြောဖူးတယ်။
သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့လဲ ပြောတယ်။
သူငယ်ချင်း မဟုတ် တွေ နဲ့လဲ ပြောတယ်။ (တပည့် တို့ ဘာတို့)
. နောက်ပိုင်း နယ်ချဲ့ လာတာ နိုင်ငံခြား ရောက် တဲ့ သူ တွေ နဲ့လဲ ပြောတယ်။
အပြင်က နေ ပြည်တွင်းကို ခေါ်ရင် ဈေးကြီး တာမို့ တစ်ခါ တစ်ခါ ကိုယ်က လဲ လှမ်းခေါ်တယ်။
အဲဒီ တုန်း က ပြည်ပ ကို ခေါ်ရင် ကြိုပြီး Booking လုပ် ရတယ်။
. ဈေးချို ပေမဲ့ Booking လုပ်ဖို့ က အတော်ခက်တယ်။
တစ်နေ့ တော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်စီ Booking ခေါ်ထားခဲ့ တယ်။
အဲဒီ ညမှာ မှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တစ်ခြား သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် က အပြင် နိုင်ငံ တစ်ခု ကနေ ဖုန်းခေါ်လာတယ်။
အဲဒါ သူ နဲ့ ပြော နေတုန်း ပြည်တွင်း ဖုန်းအော်ပရေတာ မိန်းမသံ ကြီး ဖြတ် ဝင်လာ တယ်။
“?? နိုင်ငံ” ရပြီ။ ပြောမှာလား တဲ့။
ဘယ်လို ဖြေသင့်တုန်း? . နောက်ဆုံး Result က ဘာလို့ ထင်တုန်း? lol:-)))
The Feeling (Love It When You Call)
I foundaswitch, Turned it on
I was so near, Now you’re so far
Are you quite sure, Just who you are
O you could choseafriend but you don’t seem to have the time
I wonder if you ever get to say what’s on your mind
O takealittle time, takealittle time
I’m flipping withacoin that’s gotatail on either side
I’m gonna be the one who makes you stop and realise
မြစပဲရိုး says: Yea I wonder where you been
I love it when you call, I love it when you call, I love it when you call
ဇီဇီခင်ဇော် says: နောက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားးမှာတောင် အမှန် ၃၀% ပါတယ်… တဲ့
Ma Ma says: (ပထမအတွေး)
ကိုယ့်ဆီခေါ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဦးစားပေးရမှာပေ့ါ။ (ဒုတိယအတွေး)
ကိုယ့်ဆီက ခေါ်ရတာမလွယ်တော့ ခေါ်လို့ရတုန်းပြောမှ။ (တတိယအတွေး)
ဂရုကောလေး ပြောလို့ရရင် ကောင်းမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဇီ ကလေး ရဲ့ ၃၀% တွေ လာပါ။ အဖော်ရအောင်လေ။ ချစ်မ
အဲ့တုန်း က မိနစ်ပိုင်း ဂရုချက် ဖြစ်သွားသဗျ။
ဟို အပြင်က နှစ်ယောက် ရယ်။ ကိုယ် ရယ်။ အော်ပရေတာ မိန်းမ ရယ်။